I-Digital Marketing Landscape | Martech Zone
I-Digital Marketing Landscape
NgoLwesibili, Januwari 8, 2019 NgoMsombuluko, Januwari 7, 2019 Douglas Karr
I-2019 isondela eduze futhi ukuziphendukela kwemvelo okuqhubekayo endaweni yokukhangisa kuyaqhubeka nokushintsha indlela esenza ngayo ukukhangisa kwedijithali. Sesivele sibuke ezinye izitayela ezintsha zedijithali, kepha ngokwezibalo, amabhizinisi angaphansi kwama-20% asebenzise izitayela ezintsha kucebo lawo lokukhangisa ledijithali ngo-2018. Le faсt idala impikiswano: sibuka izitayela ezintsha ezilindele ukwenza amagagasi unyaka ozayo, kepha imvamisa, unamathela endleleni endala.
I-2019 ingaba unyaka wokuletha imikhuba emisha yokukhangisa yedijithali. Okusebenze kudijithali ngonyaka odlule kungenzeka kungasebenzi kulo nyaka. Kulabo abafuna ukuthola ukubuka konke okuphelele kwethrendi, ithimba le-Epom Market langena shí ekushintsheni kokukhangisa kwedijithali futhi lathola umbono ophelele wemikhuba esizoyibona ngo-2019.
Izindlela zokuthatha ezisemqoka zabakhangisi:
Uma ungakaphambukisi amabhajethi akho wokumaketha ekuthengeni imidiya ngohlelo, i-2019 yithuba lakho lokugcina lokwenza lokho.
Labo abangathengi ithrafikhi ngokuhlelekile bazoqhubeka nokulahlekelwa yimali ngenkathi bekhokhela kakhulu okuvelayo nokuguqulwa.
Imakethe yedijithali iqhubekela phambili ekubonakaleni nasekusebenziseni ngokuphelele (bheka nje ukuthi ama-DSPs aguquke kanjani ngonyaka odlule).
Ukukhangisa ngevidiyo kumile ukuba yifomethi yesikhangiso se-premium - namuhla ifomethi yesikhangiso okufanele isetshenziselwe ukushayela ukuzibandakanya okuphezulu nokuletha umyalezo wakho kuzithameli ezibanzi.
Iselula ithola isabelo esikhudlwana sikaphayi wedijithali, ngakho-ke isikrini seselula sizohlala siyindlela ephumelela kunazo zonke yokushaya izethameli zakho eziqondiwe.
Tags: 2019chitha isikhangisoindawo yokukhangisaIsimo Sokukhangisa Kwedijithaliinfographicukukhangisa okuhambayoUhleloama-dollar wesikhangiso sevidiyo
I-WordPress: Ungayilayisha kanjani futhi uyishumeke i-PDF
Faka i-Pop yokuthengisa kusayithi lakho le-ecommerce